MIUI 11 dia havoaka amin'ny volana septambra miaraka amina asa vaovao | Androidsis
Tamin'ny fiandohan'ny taona ny Xiaomi dia nanamafy fa efa niasa tamin'ny MIUI 11 izy ireo. Io no kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana ny marika sinoa. Manakaiky hatrany hatrany ny fanombohany, araka ny nambaran'ny haino aman-jery isan-karazany. Mety ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana septambra izy io, noho izany dia herinandro maromaro vao hahafantarantsika ny zava-drehetra momba ity kinova vaovao ity.
MIUI 11 dia ho tonga miaraka amina andianà vaovao ho an'ny telefaona marika. Nandritra izay volana rehetra izay dia nisy ny tsaho rehetra nivoaka, saingy tsikelikely dia fantatsika bebe kokoa ny zavatra hampidirin'i Xiaomi ao amin'ilay sosona fanaingoana vaovao, miorina amin'ny Android Q.
Xiaomi dia namolavola sary masina ho an'ny MIUI 11. Araka ny voalaza tao amin'ny orinasa, ny volavola dia avy am-boalohany, noho izany dia toa tsy hitovizany amin'ireo izay ananantsika ao amin'ny kinova cape ankehitriny. Etsy ankilany, raha naneho hevitra izy ireo roa herinandro lasa izay, hahena ny doka ao.
Etsy ankilany, ity kinova vaovao an'ny kapa ity dia hanasongadina a fomba fitehirizana bateria faran'izay mafy. Ity maody vaovao ity dia hanafoana ny fiasan'ny rafitra rehetra ankoatry ny antso na hafatra, ankoatry ny famadihana ny interface ho monochrome. Na dia ho fomba azontsika ampanjifaina aza izany, avelantsika hiasa ny apps sasany.
MIUI 11 koa dia handao antsika bara fampandrenesana voamarina amin'ity tranga ity. Hihombo ihany koa ny fanohanana ny fampiharana maody maizina. Na dia misy fiovana mahaliana aza ny pikantsary, satria hofongorana izy ireo raha vao nozaraina tamin'ny olona hafa. Na dia toa izany aza dia ho fiasa izay azontsika ampiasaina.
Xiaomi dia antenaina handefa MIUI 11 fotoana fohy. Ny volana septambra dia toa ny daty izay ao an-tsaina ny marika sinoa, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy misy daty manokana amin'ity tranga ity. Noho izany dia tsy maintsy miandry vaovao hafa vao hivoaka tsy ho ela isika, indrindra ny fanolorana azy voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » MIUI 11 dia ho tonga amin'ny volana septambra miaraka amin'ny vaovao isan-karazany
Spotify dia mety hampiakatra ny vidiny any amin'ny firenena sasany
Ny Huawei Mate 20 Pro dia mandray ny asan'ny DC Dimming amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao